dad badan oo qaba karaan diiqad fudud. diiqad fudud waa marka aad dareento murugo ama ma aad dareento in aad wax. Haddii dambe ayaa muddo ka badan laba toddobaad, waxaa laga yaabaa inaad dejiye aasaasi ah.
niyad-jabka daran yahay marka aad dareentid murugo maalin kasta muddo ka badan laba toddobaad. niyad-jabka daran waa marka way adag tahay in aad aad sameyn wax sida caadiga ah maalin kasta. Tusaale ahaan, uma baahnid inaad awood u leeyihiin in ay ka degaysid sariirta iyo cadaydo ilkahaaga. Ama aadan haysan lagama maarmaan ah in aad u diyaariso quraac tamar aad carruurta iyo u qaadan dugsiga.
Haddii aad haysato diiqadda ka, waxa kale oo aad dareemi kartaa qaar ka mid ah waxyaabaha soo socda:
Cuno wax aad u badan ama ma doonayaan in ay cunaan
ku adag tahay feejignaan Lahaanshaha
Waxaad dareemi kartaa niyad sababo dhowr ah. Qaar ka mid ah sababaha ay noqon kartaa:
Aad shaqo la'aan ama shaqo aan aad ka heli karto.
Qof kuu dhow in ay u dhintaan, sida xubin qoyska ah ama saaxiib.
Aad leedahay ilmo.
Waxaad tahay dhibbane dambi ah.
Noqo mid aad u buka.
daawooyinka qaarkood ayaa laga yaabaa in aad dareento niyadjab.
Qoyskaaga leedahay taariikh murugada.
Waxaad ka heli kartaa caawinaad haddii aad la il daran caabuqa. Tusaale ahaan, haddii xubin qoyska ka mid ah uu geeriyoodo, waxaa laga yaabaa in aad dareento murugo. Laakiin haddii aan dareemay murugo, ama aad hurdada aad u badan, ama aadan rabin inaad cuntid in ka badan laba toddobaad, inaad dhakhtarkaaga oo ku saabsan siyaabo kala duwan si ay u caawiyaan la hadli kartaa.